Raha ny setroka aloha dia midonaka mahajambena mampirotsa-dranomaso mihitsy aza, ny hanina izay efa ela no niandrasana azy tsy mety masaka. Tsy manana fahazotoana haka kitay angamba ny mpandroso afo ary ahiana fa maro amin’izy ireo no mangarom-bilany. Ela koa izay niandrasan’ ny vahoaka an’i Paoly izay ka izay tsy maty noana dia very toky. Am-polo taonany izay no efa firesaka izany hoe «samy mandeha, samy mitady», izany hoe samy olon-ko azy eny eto amin’ny fiarahamonina. Tany mena nefa tsy mirehitra, rehefa lany ny eo am-pelatanana ka na hikaokaoka vilia eo aza ny tena tsy misy arapaka intsony. Mivarina any amin’ny fangalaram-pihinana izay sahy ratsy, mitombo andro aman’alina ireo mpanao ratsy isan-karazany na amina fisolokiana, na hala-botry, na fanafihana amina herisetra… Ao no milaza aza fa hanahaka an’iza moa raha tsy haka tahaka amin’ny fanaon’ny any ambony any.
Diso fiheverana kosa angamba ireo mpanao safobemantsina milaza fa ny any ambony any dia izay tsy manao no bado. Aoka rê! Dia ho ratsy daholo ve ireo olona tompon’andraikitra ambony. Izany anefa ny fiheveran’ny maro. Andeha atao fa tsy ny olona rehetra any no ratsy fa ny fakampanahy no mahery vaika. Na tsy tia hanendrikendrika aza vitsy ihany ny olona tsy mino fa fanaovan-karena ny fandraisana andraikitra ambony, na iza na iza ao araky ny fiheveran’ny maro dia manao na manimbina vola amin’ny fomba samihafa. Izay ve ilay ozona manambara fa tsy ho afa-bela amin-dRafahantrana ny maro an’isa. Inona izany no andrasana, anao an-drafotsibe ambody laona ve hiandry fotsiny izay figadonany?
Fanjakan’ny baranahana ny eto amin’ny tanàna. Tsy ny olona no ratsy, tsy ny lalàna mifehy no tsy misy, ny fampiharana azy no goragora. Sarotra no manenjana io fampiharana lalàna io anefa, mifamatopatotra ny maro tompom-pahefana na amperin’asa na ny teo aloha ao amin’ny sampana samihafa eo amin’ny ambaratonga maro. Manahirana noho ny sava hao ny fanaovana sivana anavahana ny tsara sy ny ratsy. Santionany fotsiny no tazana na fantatra aza fa maro ireo tsy maty nanota. Hiandry fahagagana ve izany? Tsy hisy io! Aty amin’ny vahoaka ihany no mipetraka ny adidy amin’ny fikarohana ny fomba hifehezana ny fitondrana, ny fomba fampiharana ny lalàna famatorana izay maditra. Ny tady azo atao betsaka, ny fonja azo alalahana, fa iza no hamatotra, iza no hampiditra any am-ponja…